सन्दीप लामिछानेको अर्काे कीर्तिमान, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमडौं । एकपछि अर्का सफलता प्राप्त गरिरहेका नेपला स्टार लेग स्पीनर सन्दीप लामिछानेले मलेसियामा चम्किा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका छन् ।
मलेसियामा शुक्रबार सम्पन्न भएको आईसीसी वल्र्डकप टटी ट्वान्टी एशिया बीको छनोट प्रतियोगितामा ६ वटा खेलबाट २४ विकेट लिँदै नेपालका लागि एकै सिरिजमा सबैभन्दा बढि विकेट लिने खेलाडी बनेका हुन् । यसअघि यो राष्ट्रिय कीर्तिमान बसन्त रेग्मीको नाममा थियो जसले २१ विकेट लिएका थिए ।
मलेसियामा रहँदा सन्दीप ३ पटक म्यान अफ दि म्याच भइसेका छन् भने शुक्रबारको खेलमा पनि उनले सो पुरस्कार पाउने सम्भावना छ ।
सन्दीपले म्यानमारविरुद्धको खेलमा २ ओभर बलिंग गर्दै ३ रन दिएर ४ विकेट लिएका थिए । यस्तै भुटानविरुद्धको खेलमा ४ ओभर बलिंग गर्दै ६ रन दिएर ३ विकेट लिए ।
मलेसियासँगको खेलमा उनी झनै आक्रमक देखिए । सो खेलमा उनले ४ ओभर बलिंग गर्दै २० रन ५ विकेट लिए । चीनसँगको खेलमा ४ ओभरमा ४ रन दिएर ३ विकेट लिए ।
यस्तै थाइल्याण्डसँगको खेलमा उनले ३ ओभरमा ८ रन दिएर ५ विकेट लिए। यस्तै शुक्रबारको खेलमा उनले सिंगापुरविरुद्ध ३.३ ओभरमा १६ रन दिएर ४ विकेट लिए ।